Xagee buu Ciise ku nool yahay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Haa, Ciise wuu nool yahay wuuna ku nool yahay qof kasta oo isaga u aqbalay inuu noqdo Badbaadiyaha iyo Rabbi. Bawlos wuxuu sheegay in iskutallaabta lagu qodbay Masiixa. Sidaa daraadeed wuxuu dhihi karaa: "Weliba waan noolahay; laakiin aniga mar dambe aniga ma aha, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira. Laakiin waxaan jidhka ku noolahay, anigu waxaan ku noolahay aamin xagga Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo naftiisa isu bixiyey (Gal.2,20).
Ku noolaanshaha nolosha Masiixa micnaheedu waa inaan nahay muujinta nolosha uu ku hogaamiyay halkan dhulka. Nolosheena waa la dhex geliyaa oo lala midoobaa noloshiisa. Caddaynta aqoonsiga waxay ku tiirsantahay hal gacanta iskutallaabta aqoonsiga ee aan dhisney. Muujinta jacaylkeena iyo daryeelkeena ayaa caadi ahaan raacaysa wicitaankeena (aasaaska iskutallaabta) markii aad noqotay abuur cusub (qabiilka iskutallaabta) iyo nimcada Ilaah ayaa la helay ilaalin (isugeynta iskutallaabta).
Waxaan nahay muujinta nolosha Masiixa maxaa yeelay waa nolosheena dhabta ah (Kolonel 3,4). Waxaan nahay muwaadiniinta jannada, ee ma nihin dhulka, oo waxaan nahay ku meel gaar oo kumeelgaar ah jirkeenna jir ahaaneed. Nolosheenu waa sida neefta uumi ka baxdo isla markiiba. Ciise inagu dhex jira waa mid joogto ah oo dhab ah.
Rooma 12, Efesos 4-5 iyo Kolosay 3 waxay ina tusayaan sida loogu noolaado nolosha dhabta ah ee Masiixa. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan fiirino xaqiiqooyinka jannada, ka dibna aan u dhinno waxyaalaha xunxun ee ku qarsoon gudaha (Kolonel 3,1.5). Aayadda 12aad waxaynu ku dhawaaqaynaa in innaga, sida kuwa Ilaah doortay, quduusiinta iyo kuwa la jecel yahay ay tahay inaan u qaadanno naxariis, naxariis, is-hoosaysiin, qabow, dulqaad. Aayadda 14 ayaa ina baraysa: "laakiin waxaas oo dhan [waa soo jiidaa] jacayl, kaas oo ah xidhiidhka kaamilnimada."
Maaddaama nolosheena dhabta ahi ay ku jirto Ciise, waxaan mataleynaa jirkiisii ​​muuqaalka ahaa ee dhulka waxaanan ku hogaamineynaa nolosha Ciise ruuxiga ah ee jacaylka iyo wax bixinta. Waxaan nahay qalbiga uu jecel yahay, gacmaha uu ku dhejisanayo, gacmaha uu ku caawiyo, indhaha uu ku arko, iyo afka uu ku dhiiriyo kuwa kale kuna amaanayo Ilaah. Noloshan waxaan nahay midka kaliya ee ay dadku ka arkaan Ciise. Sidaa darteed noloshiisa, oo aan soo bandhignay, waa inuu sifiican u fiicnaado! Taasi waxay sidoo kale noqon doontaa haddii aan wax walba u qabanno dhagaysi hal-nin - Ilaah iyo wax kasta oo ammaanta u leh.
Haddaba xaggee buu Ciise ku nool yahay hadda? Wuxuu ku nool yahay halka aan ku nool nahay (Kolosay 1,27b). Miyaan u oggolaanay in noloshiisa la baadho ama miyaynu isaga xirnaa isagoo qarsoon, si qotodheer u qarsoon oo aan la ogeyn ama u caawinay dadka kale? Hadday sidaas tahay, aynu nolosheenna ku qarinno (Kolosay 3,3) ha u oggolaado inuu innaga dhex noolaado.